Mawjadaha Cusub ee Daraasadaha Ku Saabsan Daweynta Daaweynta Cudurada Maskaxda • Dawooyinka Inc.eu
Mawjad cusub oo cilmi baaris ah oo ku saabsan awoodda daaweynta ee cilmu-nafsiga
Khubarada caafimaadka iyo dadweynaha waxay bilaabeen inay fiiro gaar ah u yeeshaan daawada iyo daweynta ka imaan karta walxaha dhimirka sida LSD, psilocybin iyo DMT. Cilmi baaris ku saabsan suurtagalnimada isticmaalka maskaxiyan waa xitaa heerkii ugu sarreeyay abid maadaama baahida loo qabo ikhtiyaarrada daaweynta kale ay sii kordhayaan.
1 Cilmi-baaris maskaxeed casri ah
1.1 Baaritaanka Ketamine
1.2 Baaritaanka DMT
1.3 Baadhitaanka Psilocybin
2 Mustaqbalka daawada maskaxda iyo awooddeeda daaweynta
Koox yar oo ka mid ah dhakhaatiirta maskaxda ayaa hormood ka ahaa cilmi baaris ku saabsan sanadihii XNUMX-meeyadii dawada dhimirka ee LSD ee daaweynta khamriga iyo tiro ka mid ah cudurada maskaxda. In kasta oo natiijooyinka daraasaddan ay ahaayeen kuwo rajo leh, haddana daraasadaha waxaa la joojiyay XNUMXs sababo la xiriira falcelin bulsheed iyo siyaasadeed oo caan ka ah "dhaqanka hippie" ee la xiriira isticmaalka maskaxda.
Cilmi-nafsiyeedka sida psilocybin - oo laga helo boqoshaada 'sixirka' -, LSD iyo DMT ayaa si ballaaran looga mamnuucay adduunka oo dhan, in kasta oo calaamado hore ay muujinayaan inay saameyn weyn ku yeelan karaan daaweynta. Si kastaba ha noqotee, cod-bixiyayaasha iyo sharci-dajiyayaashu waxay si tartiib tartiib ah u bilaabeen inay ku baaqaan in la takooro maskaxda.
Tusaale ahaan, magaalooyin dhowr ah oo ku yaal Mareykanka ayaa hadda ka qaaday ciqaabta ciqaabta ee isticmaalka iyo haysashada maskaxda. Intaa waxaa dheer, codbixiyeyaasha Oregon (US) waxay doorteen inay xukumaan dhammaan daroogooyinka, oo ay ku jiraan kuwa maskaxda, iyadoo California ay sidoo kale tixgelinayso sharci la mid ah.
Cilmi-baaris maskaxeed casri ah
Ka dib muddo dheer oo laga reebay cilmi-baarista caafimaadka iyo daaweynta, saynisyahannadu waxay mar kale muujinayaan xiisaha weyn ee sida xeryahooda maskaxda loogu isticmaali karo si wax ku ool ah si loogu daaweeyo xaaladaha sida shisoofrani, niyad-jabka iyo xitaa istaroogga dadka.
Dawladda Kanada ayaa dhowaan ku dhawaaqday inay maalgelin doonto tijaabada caafimaad ee ugu horreysa ee nooceeda ah si loo qiimeeyo daaweynta daaweynta ketamiin ee niyadjabka laba-cirifoodka. Daraasadu waxay qiimeyn doontaa amniga iyo waxtarka ketamine ee xididada bukaanka qaba niyad-jabka laba-cirifoodka. Hadda waxaa la soo sheegay in ku dhowaad saddex-meelood laba meel bukaanada hela daaweynta caadiga ah ee niyad-jabka laba-cirifoodka aysan si buuxda u soo kaban.
Waxaa sidoo kale lagu soo warramey in malaayiin Mareykan ah ay dhawaan heli karaan daaweyn loogu talagalay daaweynta maskaxda ee maskaxda si loo wajaho tirada sii kordheysa ee niyadjabka iyo walwalka la xiriira aafada socda. Adeeggan cusub wuxuu siin doonaa ilaa 100 milyan oo muwaadiniin Mareykan ah fursad wanaagsan oo ay ku heli karaan daaweynta nafsaaniga ah ee caawiya ketamiinka (CAP).
Daraasad kale oo nooceeda ah ayaa qiimeyn doonta saameynta daaweynta DMT ee wejiga 1 ee daraasadda istaroogga aadanaha. Daraasadu waxay ujeedadeedu tahay in la go'aamiyo nabadgelyada, dulqaadka iyo qaadashada walaxda firfircoon (farmashiyaha) ee faleebada DMT ee faleebada, ugu horreyn "in la aqoonsado qiyaasta daawada subhallucinogenic si loo taageero tijaabooyinka bukaan socodka ee istaroogga".
Daraasad horudhac ah oo ku saabsan DMT-tayo-cilmi-baaris ayaa sidoo kale ka socota goobta cilmi-baarista ee Finland oo loo aqoonsaday inay tahay hoggaamiye caalami ah oo loogu talagalay daraasadaha horudhaca ah ee istaroogga.
Shirkadda dawooyinka yar yar ee Pharma ayaa dhowaan soo bandhigtay wajiga koowaad ee tijaabinta caafimaad ee DMT ee Boqortooyada Ingiriiska. Daraasadu waxay qiimeyn doontaa awooda daweynta ee daawada dhimirka - taas oo hada loo qoondeeyay maadada heerka A - cudurka dhimirka, oo ay kujirto niyad jab.
Marka lagu daro kalfadhiyada cilminafsiga ee khabiirnimada, kaqeybgalayaashu waxay helayaan daaweyn DMT si loo daaweeyo sababaha niyadjabka.
Een daraasad dhowaan lagu daabacay 2020 waxay muujisay awooda daaweynta psilocybin ee daaweynta xanuunka weyn ee niyadjabka. Daraasadu waxay ogaatay in 71% kaqeybgalayaasha qaadanaya diyaarinta maskaxda ay muujiyeen in kabadan 50% hoos udhaca astaamaha kadib afar todobaad oo daaweyn ah. Kalabar kaqeybgalayaashu sidoo kale waxay galeen cafis.
Awoodda daaweynta ee cilmu-nafsiga ayaa lagu muujiyey daraasado intaa ka sii badan! (afb.)
Mustaqbalka daawada maskaxda iyo awooddeeda daaweynta
Waa aamin in la yiraahdo cilmi baarista caafimaad ee ku saabsan cilmu-nafsiga waa nooc ka mid ah soo qabashada maaddaama saynisyahannada iyo dhakhaatiirta cilmu-nafsiga ay dib ugu soo laabteen helitaanka walxaha si ballaaran loo xaddiday in ka badan nus qarni.
Haddii horumarkan hadda socda, oo ku sii soconaya sharciga iyo sidoo kale warshadaha dawooyinka iyo caafimaadka, waxay u badan tahay in noocyada cilmu-nafsiyeedku ay dhowaan noqon doonaan xulasho daaweyn caadi ah oo loogu talagalay xaalado kala duwan, sida niyad-jabka, walwalka iyo jahwareerka walaaca ka dib ( PTSD).
Ilo ay ka mid yihiin Canex (EN), ClinicalTrialsArena (EN), PRNewsWire (EN)
CBD miyuu caawiyaa OCD?
Cudurka 'Obsessive-compulsive disorder' (OCD) - oo sidoo kale loo yaqaan 'obsessive-compulsive disorder' (OCD) - waa cudur maskaxeed oo sababa dabeecad soo noqnoqota ...